Kedu ụgwọ nke ụgwọ? Nkọwapụta nke ụbụrụ ego
Malite mgbazinye ego Wiki gearing
5 nde ụgwọ nwere ụlọ ọrụ ma ọ bụ obodo, na-ada ụda. Mana nchịkọta ihe atụ a adịghị enye ozi gbasara ụgwọ nke ụlọ ọrụ, obodo ma ọ bụ steeti. Kama nke ahụ, onye ọ bụla chọrọ ogo nke ụgwọ, kwa gearing, Otú ọ dị, ụgwọ nke ụgwọ abụghị nanị nke ejiri ụgwọ ahụ dum, ma ọnụ ọgụgụ akụ na ụba ndị ọzọ na-arụkwa ọrụ ebe a. Ndị a na-agụnye, dịka ọmụmaatụ, ego ha nwetara, ma ọ bụ karịa karịa, uru a na-eme. Nke ikpeazụ a bụ ihe dị mkpa ebe ọ bụ, mgbe ọ nwụsịrị ego niile, hara nhatanha a pụkwara iji ya kwụọ ụgwọ. N'okwu ego, ụgwọ nke ụgwọ ahụ kpebiri site na ụgwọ dị n'etiti ụgwọ na ịkwụ ụgwọ.
Esemokwu na ogo nke ụgwọ
Na mgbakwunye na ụgwọ nkịtị, ụgwọ ka dị. Nke a na-agụnye, dịka ọmụmaatụ, ụgwọ dị oke egwu. Ọnụ ụgwọ nke ụgwọ ahụ adịghị adabere na nha nha, ma na ego. N'ezie, ajụjụ ahụ bilitere, gịnị kpatara onye ga-eji mata ụgwọ nke ụgwọ na ụlọ ọrụ, obodo ma ọ bụ obodo? Nke a bụ isi n'ihi ego. Ọ na-adịkarị mkpa ịkwụ ụgwọ mgbazinye ego n'aka ụlọ akụ na ụlọ ọrụ ego. N'ezie, ha na-achọ ịnwe ihe ize ndụ nke obere ụgwọ ego dị ntakịrị ka o kwere mee. Otú ọ dị, okwu ego ma ọ bụ ihe ndị dị otú ahụ na-enyekarị obere nkọwa banyere ọnọdụ akụnụba. Naanị n'ihi na ọ na-abụkarị naanị ọnyà na-ejedebeghị otu afọ na nchịkọta zuru ezu na-efu. Site n'inye ihe ọmụma banyere ogo ụgwọ, ụlọ akụ nwere ike ịchọpụta ma a ga-enwekwu ego na ụgwọ nkwụghachi na ntinye ego na-akwụ ụgwọ. nke ka elu ma ọ bụ ụgwọ nke ụgwọ, obere ụlọ ọrụ isi obodo ma ọ bụ obodo nwere. N'ihi nke a, site na mmụba na-arịwanye elu, ọnụọgụ mmiri na-ebelata, mgbe ahụ nwere ike ime ka nkwụnye ego ọzọ adịkwaghị ma ọ bụ agaghịkwa enweta ebe dị elu. Ọbụna ma ọ bụrụ na ụlọ akụ ka na-agbazinye ego, ha nwere ike ịnwe nnukwu ọnụego ma ọ bụ chọọ ka ha nweta ego. Ihe nwere ike ịmalite ịbawanye na gburugburu ekwensu, ebe ọ bụ na nke a nwere ike iduba ọganihu dịkwuo n'ókè nke ụgwọ, nke ahụ nwere mmetụta dị njọ na nkwado nke ụgwọ na nkwụnye ego.
O nwere ike inwe nnukwu ihe ọ ga-esi na ya pụta
Otú ọ dị, a gaghị eleghara ụgwọ nke ịkwụ ụgwọ anya n'akụkụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na, dịka ọmụmaatụ, ịkwụ ụgwọ nkwekọrịta dị ugbu a, a ga-edozi ego kachasị elu maka ụgwọ. A na-emepụta nke a na nkwụnye ụgwọ na-akwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na ọkwa a agafeela, nke a nwere ike inwe nnukwu nsogbu. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe nkwekọrịta, ọ bụ nkwekọrịta nkwekọrịta. A na-emekarị ka ụlọ ọrụ ego kwụsịrị mgbe oge dị mkpirikpi iji belata ụgwọ. Ya mere, ebe a, ohere pụrụ iche nke ịkwụsị, nke ahụ nwere mmetụta na nkwupụta akwụmụgwọ niile ruru kpọmkwem na ịkwụ ụgwọ ahụ. Dịka a ga-ahụ site na nke a, ogo ụgwọ nwere ike ọ bụghị naanị inye ogo ogo ozi kamakwa akụkụ dị mkpa nke nkwekọrịta. Ya mere, ụlọ ọrụ dị iche iche na-enwekarị nchegbu iji na-akwụ ụgwọ ụgwọ dị ala dị ka o kwere mee.
Isiokwu bu nke aAC Discount n'aka
Isiokwu ọzọuwe ojii